Markabkii ugu horeeyay oo maanta ku soo xirtay Dekedda Garacad | Dhacdo
Home Wararka Maanta Markabkii ugu horeeyay oo maanta ku soo xirtay Dekedda Garacad
Markabkii ugu horeeyay oo maanta ku soo xirtay Dekedda Garacad
Markabkii ugu horeeyay ayaa maanta ku soo xirtay Dekedda Garacad ee Gobolka Mudug, tan iyo markii wejiga hore ee dhismaha dekedaasi la soo geba-gabeeyay.
Dhismaha dekedan ayaa waxaa maalgeliyay ganacsatada Soomaaliyeed, iyadoona uu dhismaheedu socday shantii sano ee ugu dambeysay, sida uu sheegay Warsame Axmed Shidane, oo ah Madaxa Shirkadda Wadaagsin oo gacanta ku haysa dhismaha dekedaasi.
Warsame Axmed ayaa sheegay in markabku siday qalab loogu talagalay dhameystirka dhismaha ee Dekedda Garacad.
Madaxweynaha Puntland, Siciid Cabdullaahi Deni ayaa tani ku tilmaamay guul taariikh ah. Madaxweynaha ayaa warsaxaafadeed ku sheegay “Waxaan ugu hambalyeynaya shacabka Puntland iyo guud ahaan Soomaaliyeed, guusha taariikhiga ah ee bilowga ah oo aynu ka gaarnay dhismaha Dekadda Garacad, oo maanta uu ku soo xirtay markabkii ugu horeeyay.
Mashruuca oo ah kii koobaad ee noociisa dalka ka qabsoomay burburkii ka dib, wuxuu ku dhismay isku tashi dadka reer Puntland ay ku dhiiradeen Dowladda iyo Shacabka, markii la dhaqaajiyayna kasbaday dadka kale ee Soomaaliyeed in ay ka qayb qaataan.
Waa qorshe soo socday oo Dowladdii naga horeysay bilowday anana aan halkii ka sii wadnay, ka dhabeynay oo u dhabar-adeygnay marxalad kasta aanna rajeynayno inuu dhameystirmo mustaqbalka, waana uga mahadcelinaya cidkasta oo ka qayb qaadatay Dowlad iyo Shacaba, gaar ahaan ganacsatada iyo Shirkadaha dhisaya.
Waxaynu maanta tusnay adduunka in dadka Soomaaliyeed ay waxqabsan karaan, laakiin loo baahanyahay ku-dhaca iyo u dhabar adeyga, runtii dhaqaale ahaan, farsamo ahaan iyo shaqaale ahaan dalkeena waan dhisan karnaa.”
Previous articleBaydhabo oo maanta lagu doortay afar Xildhibaan
Next articleMadaxweynaha Somaliland oo qaabilay Madaxweynaha Dowlad Deegaanka